ukukhohlisa Optical zisebenzisa umehluko phakathi kwalokho amehlo akho ubone futhi yini ubuchopho bakho uyabubona. Babonisa ukuthi isimiso sakho sokubona ukuhlela isithombe ngaphambi ufunde ngakho - njengoba umsizi wakho, agcina ukuphuma ebaluleke kusukela engabalulekile. Abasebenzisi ukudala ukukhohlisa optical, isikhathi eside ngaphambi kokuba bafunde ukuthi kusebenza kanjani. Kuze kube manje, intuthuko endleleni yokuphambanisa amagama yezinzwa ukuvumele ukuba baqonde indlela izinqubo ezibukwayo kukhona, ukukhohlisa ubuchopho bakho. Kodwa kukhona labo angakawamukeli wakwazi ukuchaza.
I inkohliso of isithunzi chessboard
Wonke umuntu uyazi inkohliso umzimba lapho isithunzi chessboard uwela, futhi ezinkanjini ezimbili ngaphandle izithunzi futhi ngaphakathi kuwo bekulokhu libukeka ehlukile, omnyama nomhlophe. Kodwa eqinisweni they are nombala ofanayo. Edward Adelson ngo-1995 ngosizo ngendlela evumelana nale nganekwane luye lwabonisa abantu indlela somuntu sokujikeleza ezibukwayo Uyabubona isithunzi. Lapho ezama ukunquma umbala ebusweni ubuchopho uyakucabangela ukuthi amaqabunga emthunzini, futhi ngokuzenzekelayo kutshela ukuthi kudingeka yenziwe kabusha njengoba elula. Ngakho, ubuchopho uhumusha njengoba yeseli emthunzini kube lula, kodwa eqinisweni it has nombala ofanayo njengoba ingaphandle umthunzi cell.
Lokhu kuwutalagu circle crosshairs omnyama maphakathi ehlanganisa izindawo purple. Lezi izindawo zinyamalala, Ukuhlanganiswa nge elimpunga. - Umsebenti wakho ukugxila crosshairs futhi balindele - uzophawula ukuthi izindawo purple musa empeleni zinyamalale, futhi babe luhlaza! Lokhu inkohliso ezibukwayo ngokuthi Troxler umphumela futhi latholakala 1804. Lo mphumela kubikwa ukuthi abantu iso okungukuthi ukwazi gxila into ezihambayo, abakhuthele, indiva konke okunye. Amehlo akho adinge isikhashana ukuze ishintshe, uma ukugxila crosshair ukujwayela, bese baqala ukulandela iphuzu ukushintsha okungukuthi lenhlanganisela oluhlaza ne-lilac ubala njengoba engabalulekile.
Uma ugxila ukukhanya eshaywa maphakathi, uzophawula ukuthi amachashazi aphuzi ehlakazekile emhlabeni umthombo wokukhanya, uqale ngezikhathi zinyamalale futhi ivele ezindaweni ezingalindelekile. Lokhu kungenxa lomkhuba, okuthiwa ubumpumputhe okubangelwa ukuhamba. Akakalenzi olwamukelwa incazelo, kodwa ososayensi abaningi bakholelwa ukuthi uma livela eyinhloko cortex okubonakalayo zazisa ubuchopho, unesibopho ngokucubungula ulwazi mayelana lezinto static kanye ashukumisayo.
Kulesi inkohliso weJiyomethri optical imivimbo bheka kwaba sengathi ivele. Hering wazikhuluma umphumela ukuthi ubuchopho bomuntu is overestimating engela empambana ebomvu kanye nezinye imivimbo mpo okwesibhakabhaka. Kodwa kungani lokhu miscalculation kwakwenzeka? Cishe, lokhu kungenxa ukuthambekela kwabantu zibukeke ukubikezela ikusasa. Khanyisa kakhulu ngokushesha ukuwa kuyi-retina, ngakho abantu ezibukwayo uhlelo okungukuthi kancane kancane athuthukile ngaleyo ndlela njengoba isinxephezelo olephakathi ukukhanya Okungishaya retina nobuchopho we zilethwe isignali.
Ibha evundlile kule kuwutalagu kushintsha umbala waso kusukela ukukhanya ebumnyameni, kuyilapho ngesikhathi nse, kodwa nje ngemuva okuphambene, eshintsha kusuka kokumnyama kuya kokukhanyayo. Njengoba ungase ukuqagela, kungcono nje kuwutalagu. Uma uvala ingemuva, uzobona ukuthi i-strip ovundlile nangebala. Lokhu inkohliso kufana kakhulu kuqala, nge chessboard - ubuchopho ihlaziya isimo lapho kukhona izingxenye ezahlukene ibha ovundlile, futhi kufihla ke lapho ukukhanya ngemuva, futhi icacisa lapho ngemuva simnyama.
Okwamanje, akukho ncazelo ecacile iqiniso, yingakho kukhona ukunyakaza luyakhohlisa. Abanye bakholelwa ukuthi lokhu kwenziwa ngenxa encane iso ukunyakaza okungalindelekile ezenza ucabanga ukuthi isithombe ihamba. Abanye bakholelwa ukuthi uma ubheka iphethini eziyinkimbinkimbi, cortex yakho ezibukwayo iyaqala ukudida izinto ahambisane ashukumisayo, ngakho ucabanga ungahambisa. Kunoma ikuphi, le illusion futhi kuwutalagu, nesebenzela kuzo zonke izimo, futhi awukwazi ukukholisa ubuchopho bakho.
Phosphorus (amaminerali ndaba): umthamo wansuku zonke e yokudla komuntu
Umqondo indlela kwezesayensi